Vaovao - Zns New Collection - Viral Off Collection
Faly be izahay manomboka ny andiany vaovao Viral Off Collection.
Amin'io vanim-potoana manokana miaro tena io no zava-dehibe kokoa. Viral Off Collection dia mampiasa teknikan'ny Polygiene ViralOff® izay manome fiarovana manokana sy mahafinaritra. Ny saron-tava sy ny akanjo mafana Viral Off dia raisina an-tanan-droa mba hanomezana filaminana manokana, fomba namboarina ary loko namboarina.
Amin'ny fotoanan'ny tantara Coronavirus dia hitantsika fa mila fitsaboana lehibe amin'ny fananana antivirus. Nanomboka teo amin'ny sehatry ny fikolokoloana ny polygiene nandritra ny ady tamin'ny SARS tamin'ny 2004. Noho ny fiavianay dia afaka nandalo ireo teknika ilaina, fahaizana, fomba ary dingana ilaina izahay hanomanana ny famoahana ny marika Polygiene ViralOff® - teknolojia fitsaboana lamba .
Polygiene ViralOff dia marika iray amin'ny fitsaboana ny lamba sy vokatra hafa izay mampihena 99% ny viriosy voasedra ao anatin'ny roa ora. Fitsaboana maharitra sy maharitra izany. Avelao hipetraka mandritra ny adiny roa ny vokatra ary tsara ny mandeha indray. Mba hahombiazana tsara sy maharitra dia manasa kely kokoa, raha tsy ilaina, ary tsy misy akony amin'ny hoditra izany satria tsy manelingelina ny zavamaniry bakteria voajanahary.